Ingxoxo yabamele i-Opera (isiphequluli) ivuselelwe | Kusuka kuLinux
Inhlolokhono yabamele i-Opera (isiphequluli) ibuyekeziwe
pvv92 | | Aplicaciones
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sinikezwe ithuba lokubuza imibuzo ethile kumuntu ophethe / oxhunywe ekwakhiweni kwesiphequluli sewebhu Opera.
Ngibashiyela lapha ukuthi ufunde, izimpendulo zithakazelisa ngempela:
<° I-Linux: Kuhle,
Okokuqala, injabulo enkulu, igama lami nginguFrancesco futhi sihlonishwe kakhulu ngaleli thuba osinike lona. Impela kuyilungelo ukuthi ummeleli walesi siphequluli esihle kakhulu angasisiza.
Amakhozi: UFrancesco omuhle,
Nginguye UCharles McCathieNevile (waziwa ngo Izingwegwe ukwenza impilo ibe lula 😉), uMqondisi we-Standardization e-Opera, okhuluma iSpanishi yize eyi-Australia. Uxolo ngokubambezeleka kokuphendula, ngiseholidini ...
<° I-Linux: Uma sikhuluma nge-inthanethi, sikhuluma ngamazinga, sikhuluma ngezilimi ezahlukahlukene nangezindlela ezahlukahlukene zokuhlela amawebhusayithi, okuvame ukudala ukuthi iwebhusayithi efanayo ikhombise kahle kusiphequluli esisodwa hhayi kwezinye. Ucabanga ukuthi i-intanethi injani okwamanje? Ngabe la mazinga ayahlonishwa?
Amakhozi: Iwebhu yinto ephilayo neguqukayo, ngakho-ke okuthile kohlobo lwayo kuhlala kushintsha. Eminyakeni eyi-10, eyisi-5 neyesi-2 eyedlule, ukuhlonishwa kwamazinga kukhule kakhulu, yize lokhu kungasho ukuthi yonke iwebhusayithi yenziwa ngokuhambisana nawo wonke amazinga afanele.
Khumbula ukuthi amanye amasayithi awekho entuthukweni, awasoze aguquke, yize ekhona. Abanye bazoshintsha kancane futhi ezimweni ezinjengamabhange noma izicelo zezimboni ezinezigidi zabasebenzisi, kuyaqondakala ukuthi kwesinye isikhathi onjiniyela babo bayesaba kancane. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwamazinga manje sekuhlonishwa njengeyona ndlela engcono yokuqinisekisa ukuthi isiza sizoba nokuphila okude nokusebenzisekayo, okusebenza kahle kakhulu kwiziphequluli.
Futhi kufanele futhi sicabangele ukuziphendukela kwemvelo nokusungula izinto ezintsha. Ukwakha indinganiso entsha, kuzofanela uyihlole emhlabeni wangempela. Incazelo kulula ukuyibhala, kepha ingahle ihlangabezane nezidingo zawo wonke umuntu. Kungakho inqubo edalula ubuchwepheshe obusha kubabukeli abaningi futhi abahlukahlukene ibalulekile. Amanye amasayithi angahlola lobu buchwepheshe ekukhuleni, kepha namuhla ngicabanga ukuthi indlela ejwayelekile kakhulu yokuthi onjiniyela benze amaphutha ukusebenzisa ubuchwepheshe obungejwayelekile ukuze benze umsebenzi okufanele ujwayeleke endalweni. Isibonelo, uma ngifuna ukudala umdlalo ukuze ngithole imali, angikhathali ukutshela umphakathi ukuthi kufanele basebenzise isiphequluli esinjalo, ucingo olunjalo, njll., Kepha uma ngenza okuthile eyunivesithi yomphakathi, noma umsebenzi ojwayelekile, kuwukuhlukumeza ukuphoqa umphakathi jikelele ukukhethwa kwaleyo divayisi noma isistimu yokusebenza futhi izikhathi eziningi, yize nginelungelo lokuthatha isinqumo sokwenza lokho, ngoba kungumsebenzi wangasese njengephephandaba, ngingahle ngilahlekelwe yimakethe eningi ngaphezu kokuzithengisa kumhlinzeki wohlelo engigxile kulo ukuze ngibadinge ukuze ngikwazi ukuthengisa insizakalo yami.
<° I-Linux: Cishe eminyakeni emibili edlule, kube nokuqagela okuningi okuthandwa izilimi I-HTML5 noma imitapo yolwazi efana ne-jQuery ingahle ize esikhundleni seFlash ngokuzayo. Ucabangani ngalokhu? Ingabe kunjalo I-HTML5 enye indlela esebenzayo?
Kepha kunabathuthukisi abaningi abanesipiliyoni seminyaka kuFlash abangayazi i-HTML5 noma amandla ayo, futhi abakwaziyo ukwenza umkhiqizo (uhlelo lokusebenza, noma "iwebhusayithi") ku-flash, futhi bazoqhubeka nokukuthengisa lokho isikhathi eside. namanje.
<° I-Linux: Wonke umuntu uyazi ukuthi i-Opera iyi-multiplatform, singayithola ku-Symbian, Linux, Windows, Mac naku- Android. Uyibekele muphi umgomo ngekusasa? Ngabe uhlela ukuqhubeka nokuletha i-Opera kuwo wonke la mapulatifomu, njengoba ngicabanga ukuthi imele umsebenzi owengeziwe kuwe?
Amakhozi: Uma imele umsebenzi othile wokuletha i-Opera kumasistimu amaningi. Kepha hhayi kangako -sinamandla kakhulu ekwenzeni intuthuko «cross-platform» (multi-platform)-. Silokhu sibheke ezimakethe futhi sishintsha ngokuya ngokubaluleka. Isibonelo asisasekeli iSolaris, i-Amiga noma i-BeOS, ngoba abanayo imakethe engavumela umzamo. Kepha yebo, ukuhlinzeka ngesiphequluli esihle kakhulu kunoma iyiphi ipulatifomu efanelekile kuyinjongo enkulu esizoyisekela.
<° I-Linux: Enye yezinkanyezi ongakhetha kuzo isiphequluli se-Opera i-Mail Client yayo.Kungaba ubuhlanya yini ukucabanga ukuthi ngolunye usuku ingahlukana nesiphequluli, izimele futhi yakhe iqembu elifana neFirefox / Thunderbird?
Amakhozi: Crazy cha, kepha lokho akusho ukuthi sizokwenza. Bona impendulo yami embuzweni we- "Opera Lite", ngezansi ...
<° I-Linux: Okungiletha kulo mbuzo ukucabanga nge-Opera kalula njengesiphequluli. Mhlawumbe iklayenti "langaphandle" lingafaka iKlayenti le-IRC, i-Mail Client, nokunye okunjalo.
Amakhozi: «Bona impendulo engezansi ...»
<° I-Linux: Isizathu sokusetshenziswa okuphezulu kwe-Opera? Uma sikuqhathanisa nezinye iziphequluli, sisebenzisa kakhulu i-RAM. Ingabe ukusetshenziswa kwe-RAM kuyinto engeyinhle ngempela noma kungazuzisa isiphequluli?
Amakhozi: Ukusetshenziswa kwe-RAM kuncike kulokho umsebenzisi afuna ukukwenza. Ukuba nokuningi kuvumela umsebenzi osheshayo, ngokwesibonelo ukuya ekhasini langemuva (langaphambilini), bona amakhasi abukwe kuqala, noma uphathe i- «Inbox» yemiyalezo engu-11902 (enginayo njengamanje). Ukuthi kuyinkinga noma cha kuncike ezintweni ezithile ezinjengokuthi umsebenzisi ufuna ukwenzani, uma ephequlula kuphela, kungani ungasebenzisi yonke imemori etholakalayo ukunikeza umuzwa ohamba phambili?
Ngasikhathi sinye, kubalulekile ukukwazi ukugijima ngememori encane uma kuyilokhu onakho, futhi usebenzise imemori ngendlela ephumelelayo. Besihlale sisebenza kulokho, futhi njengamanje iziphequluli ezinkulu bezicabanga ngezinto ezifanayo. Sihlala sifuna ukuthuthuka, ngokwesibonelo, kunzima impela manje ukuthi i-Opera ishayisa noma yehluleke ngenxa yokuntuleka kwenkumbulo kunoma yisiphi isimo, futhi lokhu bekubandakanya ukusebenza kanzima ukukufeza. Siyaqhubeka nokubheka ukukhetha esizokwenza phakathi kokusebenzisa kahle imemori nokunikeza isipiliyoni somsebenzisi esithuthukisiwe, kanye nokubona ukuthi singakuthuthukisa yini ukusebenza kohlelo ngokwalo.
<° I-Linux: Kungenzeka yini ukuthi inguqulo ye- "Light" ye-Opera yenzeke? Lokho wukuthi, isiphequluli nomfundi kuphela RSS.
Amakhozi: Vele kungenzeka, kepha kufaka umsebenzi omningi impela. Futhi ukunquma ukuthi yini okudingekayo nokuthi yini engadingeki kuhlobo "lokukhanya" akucaci kangako, okungukuthi, kungani i-RSS hhayi iMeyili? Ukusebenza kweklayenti leBitTorrent kuyinto ewusizo kwabanye abasebenzisi, kanti abanye abazi noma badinge ukwazi ukuthi ikhona. Uma sibheka amathuba, singacabanga ngokushintsha okunye ukusebenza kube "ama-addon" (Dragonfly, ithuluzi lonjiniyela lisebenza ngaleyo ndlela, yize le ngxenye ebalulekile yomkhiqizo ekukhuleni kwayo). Kepha ukwahlukanisa izici ezidingeka kubasebenzisi abangamaphesenti ama-5 kuye kwayi-10 akusizi kulo lonke ibhodi. Njengamanje sinokulanda okuncane kakhulu kwesiphequluli (kubhekisa kusisindo sama-MBs), ukusebenza kwaso kukhona kulabo abafuna ngaphandle kokuziphoqa kwabanye.
<° I-Linux: I-Opera mhlawumbe ibe yisiphequluli esingaqondakali kahle, kuningi okukhulunywa kakhulu ngabanye, mhlawumbe ngoba laba abanye batshala imali eningi ekukhangiseni futhi bahlanganise abasebenzisi babo kakhulu, noma mhlawumbe cha. Ungakwazi yini ukwabelana ngokulindelekile kwakho kokukhula maqondana ne-Opera emakethe Yesiphequluli? Kungani, uma ingekho ngaphansi kwabanye, ayikwazanga ukungena phakathi kwabasebenzisi?
Amakhozi: Impela ingxenye ibilokhu ikhangisa. I-Google, i-Apple neMicrosoft bakhokha izigidi ukufaka izikhangiso ku-TV, asikwazi ukubeka imali engaka ekukhangiseni. Firefox Sikhule sibonga umphakathi okholelwa cishe kwimishini yezenkolo, ngaphezu kokuthola abasebenzisi bayo abaningi ngoba iGoogle ikhokhele ukukhangisa ngisho nezikhungo uqobo. Kuyathakazelisa ukuphawula lapho i-Opera iphumelele khona: emazweni angaphandle kwaseSoviet, anezinga lobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kakhulu. Kumele futhi sivume ukuthi ukucela imali ngesiphequluli kusibize kakhulu ngokomlando (yize sikulahlile lokho iminyaka neminyaka), ikakhulukazi emazweni aseMelika naseYurophu (akubanga nankinga kubantu baseRussia, kepha nabo abakhokhile) .
<° I-Linux: Ngishilo phambilini ukuthi ukungabi khona "kwempumelelo" (ukubheka "impumelelo" ngokubuka kwesabelo semakethe) kungahle kube ngenxa yokwaziswa okuncane, kepha kungaba ezinye izinto.
<° I-Linux: Ngalokhu ngisho ukuthi abasebenzisi abaningi abanankinga yokusebenzisa i-Opera njengesiphequluli, noma kunjalo abaningi, njengoba bebona ukuthi ilayisense labo likhethekile, yeka ukwenza lokho (ikakhulukazi umphakathi we-GNU / Linux)
Amakhozi: Ngokuvamile, akuwona umphakathi omkhulu kakhulu, ngakho-ke awukwazi ukumela into ebaluleke kakhulu. Lokho akusho ukuthi akuyona into.
<° I-Linux: Kungani i-Opera ingeyona i-OpenSource?
Amakhozi: Akuwona Umthombo Ovulekile ngokomlando ngoba besinesiphequluli esisebenza kahle kakhulu, esisithengise kubakhiqizi abaningi ngemali, futhi ngalezi zinzuzo sikhokhele abathuthukisi bethu. Ukuba yinkampani ezinikele kakhulu ekwenzeni iziphequluli, ngokungafani nezinye (lapho ngifaka iMozilla / Firefox, eyakhokhelwa ngokomlando yiGoogle, IBM, Sun ne-AOL ngemuva kokunyamalala kweNetscape njengenkampani ebucayi, cishe ngonyaka ka-2000), bekubalulekile ukukwazi ukuthengisa izinzuzo esizinikezile.
Ngaphezu kwalokho, isu lethu lokuthi sizovulani lalihlukile kuGoogle / Apple / Nokia njll. Esikhundleni sokuthatha i-KHTML njengesisekelo ebesivele singumthombo ovulekile othuthukiswe ngumphakathi, sithuthukise injini, presto. Ababaningi emhlabeni abangochwepheshe kulolo hlobo lwekhodi, ngakho-ke uma sibathola siyabasebenzisa (futhi-ke, siyabakhokhela). Kepha ingxenye okuyi-interface yomsebenzisi ibilokhu ivulekile kakhulu ku-Opera, ivumela umphakathi omkhulu ukuthi ushintshisane ngezifiso zawo, ezikwenzile my.opera.com namasayithi ayi-100% angaphandle kwe-Opera.
<° I-Linux: Awucabangi ukuthi lokhu kungaba inzuzo futhi kukhulise ijubane lokuthuthuka kwesiphequluli nezinto zalo?
Amakhozi: Ngokuvamile, cha. IFirefox ikhokhela abaphathi abaningi ukuphatha umsebenzi womphakathi (njengoba izinkampani, iMozilla Inc. kanye ne-Opera bebehola imali efanayo minyaka yonke), abanye abakhiqizi beziphequluli ezivulekile bakhokha amaqembu amakhulu ngaphezu kokumaketha okuningi. Sikhokha onjiniyela ngqo, okusivumela ukuthi sigxile kokusemqoka kithi, futhi onjiniyela bethu bakha izinto eziningi ezintsha eziphumelele kakhulu.
<° I-Linux: Ungathini kulabo basebenzisi abangasebenzisi i-Opera ngokuya ngohlobo lwelayisense?
Ngokuzimisela, angiqondile ukusho ukuthi yini umsebenzisi okufanele ayenze, noma okungafanele ayazi. Kepha kubonakala kimi ukuthi kunabasebenzisi abalahlekayo ngokukhetha kanjena. Umbuzo wezidingo, nokucabanga ngobuhle nobubi. Impela, umthombo ovulekile ukuvumela ukuthi ushintshe umkhiqizo, kodwa kuphela kulabo abanamandla okwenza kanjalo. Isibonelo abadumile I-OLPC (ikhompyutha ephathekayo eyi- $ 100) yagcizelela emthonjeni ovulekile, yize kwakungeke kwenzeke ukuthi bafake noma bahlanganise ikhodi kwikhompyutha, ikhodi yeMozilla yayisinda kakhulu, futhi kwakudingeka basike ukusebenza, lapho i-Opera isebenza njengamakhono amaningi .
Ngakolunye uhlangothi, abasebenzisi kumele bagcizelele ukuthi isiphequluli sabo siyawasekela amazinga, ngoba kungaleso sikhathi kuphela lapho benganquma khona ngokukhululekile ukuthi bafuna ukushintsha isiphequluli sabo, uma kusasa enye ishesha, noma inokusebenza okuthile okuthakazelisayo, noma umbala ohehayo, noma yini .
<° I-Linux: Iyiphi inzuzo i-Opera enayo ngaphezu kwezinye iziphequluli?
Amakhozi: I-logo yakho kulula ukuyibona. Konke okunye kuya ngokuthi umsebenzisi wenzani. Kimi izinzuzo ezibalulekile yilezi:
Imeyili, i-IRC, i-RSS / i-Atom namakhasimende we-BitTorrent.
Amandla okwenza ngezifiso.
Ukwazi ukuxuba "imodi yangasese" nokuzula okujwayelekile kumathebhu ahlukile.
Ukusekelwa okungcono kwe-SVG futhi ikakhulukazi ingxenye yokugqwayiza.
Ukwazi ukwabelana ngezinto ngokusebenzisa iseva elula kakhulu futhi eyakho (hhayi efwini) ngokubumbana.
Ukukwazi ukwabelana kalula ngendawo yokusebenza yami kuzingxenyekazi eziningi (ngiphatha amadivayisi we-Mac, i-Linux, i-Symbian, i-Android ne-UIQ ngaphambi kokuthi ngihambe nge-cyber nalokho okukhona).
Gcina ubumfihlo bami kahle ngokuphepha okuphezulu.
Ukulungisa iphutha kude (kwama-mobiles, noma abangane) no-Dragonfly.
Kwabanye abantu engibaziyo, ngaphezu kwezinto ezibalulekile kimi, bayalithokozela ijubane, iqiniso lokuthi lisebenza nezinhlelo ezindala kanjalo nezamanje.
<° I-Linux: Abasebenzisi bezindawo zedeskithophu ezinjenge I-Gnome, Xfce, KDE futhi ezinye izikhathi ezimbalwa sibe nezinkinga zohlobo "ukubukeka" nge-Opera. Kuhle ngokungakholeki ngeGnome ekubeni imvelo efana ne-KDE, i-Opera ihlala isebenza kahle. Ungaba nomusa uze uchaze kafushane ukuthi kungani lokhu kunjalo?
Ah. Sinokukhishwa phakathi kokusebenza nokubukeka kwesixhumi esibonakalayo ebesikade sikwenza iminyaka kungxenyekazi ngayinye, isitayela se-MVC ("Model, View, Controller", indlela ejwayelekile ejwayelekile kumcabango). Okwe-Unix (izinhlobo ze-Linux, BSD, Solaris, kanye nezinguqulo ze-linux ezivame kakhulu kumadivayisi afana ne-TV, "set top box", njll) sibe neminyaka yokuqinisekisa ukuthi sikwenza kahle, esikhundleni sokusebenzisa Ukusatshalaliswa kweLinux bese ushiya okusele kuzwe leLinux ukuxazulula izinkinga.
(Ukuphendula ngqo umbuzo "bekungeke kuthuthukise ikhodi ukube bebevulekile, nasi isibonakaliso sokuthi impendulo kungenzeka ukuthi 'hhayi' ...")
Sinotshalomali olukhulu ngokwanele kuLinux olusibiza ngaphezu kweWindows. Sinabasebenzisi abaningi beLinux, kepha cishe bonke bavela ezinkampanini ezikhokha ngokuya ngemodeli yendabuko, futhi sisenabasebenzisi abaningi kuWindows. Kodwa-ke, kuyipulatifomu ebalulekile (iningi lethu abasebenzisi be-Linux, ngokwesibonelo) esiqhubeka nokuxhasa ukunikela ngenye indlela enhle ...
<° I-Linux: Kuningi okuxoxiswane ngakho enetheni ngezinkundla nakwabanye, mayelana nezinto ezintsha ezilethwe yi-Opera emhlabeni wesoftware. Ukuphequlula ngamathebhu, i-FastDial, ukubonwa noma ukubuka kuqala kwesayithi ngokubeka isikhombisi segundane ngaphezulu kwethebhu, kungezinye zezibonelo zalokho okucatshangwa nokushiwo, okwenziwe yi-Opera / okusunguliwe.
Lingakanani iqiniso kulokhu? Uma ngabe okunye kwalokhu okungenhla kuyiqiniso, ucabangani ngezinye iziphequluli ezisemakethe usebenzisa okunye ukusebenza okwenziwe kuqala yi-Opera?
Amakhozi: Kuyiqiniso ukuthi sethule izinto eziningi ezikopishwe abanye. Futhi kufanele kube njalo. Okubi kakhulu lapho othile ezama ukukhawulela, ngokwesibonelo ngamalungelo obunikazi, ukuqamba kanye nokwamukela imibono engathuthukisa iwebhu emhlabeni.
<° I-Linux: IWindows ine-Internet Explorer njengesiphequluli esizenzakalelayo. I-Chrome OS ibizoba nayo Chrome, IGnome njengendawo yedeskithophu ine-Epiphany, KDE eneKonqueror (yize URekonq uyadabula vele). Lapho ngiya khona nalokhu, ngabe wake wakucabanga ukuzama ukubhekana nemvelo ethile yedeskithophu?
Ngamanye amagama, umbono wokuthi i-Opera yisiphequluli esizenzakalelayo kokunye ukusatshalaliswa kwe-Linux okusebenzisa i-KDE noma i-Gnome, ayilungile neze. Ingabe uke wakucabangela lokhu?
Amakhozi: Kwesinye isikhathi. Ukungabi ngabenzi, kuyenzeka lapho becela i-Opera. Ngokomlando, kuningi okwenzekile ngezingcingo, i-TV, namanye amadivayisi, futhi kwesinye isikhathi kunamapulatifomu wedeskithophu, lokho kungenxa yokuthi abakhiqizi bayayifuna, noma ngoba umsabalalisi uyayifuna, ngokwesibonelo izinkampani eziningi zocingo zicela abenzi bazo ukuba bafake i-Opera kanye / noma Isebenza mini kuzinguqulo zeselula ezizothengisa noma zikhuthaze.
<° I-Linux: I-OperaMini yisiphequluli esinamaphesenti aphezulu emakethe kuma-Smartphones. Ucabanga ukuthi siyini isizathu sale mpumelelo emangalisayo?
Amakhozi: Isebenziseka kakhulu, isebenza kahle, futhi izinkampani ezinjengeTelenor, iVodafone, i-AT & T njll ziyikhangisile. Kepha futhi ngoba amazwe lapho i-Opera yayivele inesabelo semakethe esithakazelisayo, njenge-USSR yangaphambili, yayingabaholi ekukhuleni kwewebhu ehambayo. (Inesabelo esiphezulu kuma-mobiles ngokujwayelekile - ngoba ayisebenzi ku- "Smartphone" kuphela kepha nakuma-Smartphones asuka eminyakeni eyi-10 eyedlule, asevele "eyisilima" futhi lapho kungekho okunye okunye okungokoqobo).
<° I-Linux: Ngabe ukhathazekile ngokuthi i-Opera njengesiphequluli sedeskithophu inesabelo semakethe esingafanele?
Amakhozi: Kucacile. Kepha akulona usongo ekubeni khona kwe-Opera kepha kungukuphazamiseka okukhulu.
<° I-Linux: Ngabe unokuthile engqondweni okungaguqula isimo ngokuphelele, noma ingabe uthembela nje ukuthi kwesinye isikhathi kungashintsha?
Amakhozi: Sisebenza ukuyiguqula ngangokunokwenzeka. Ungafuna yonke into, kepha awukwazi ukuyithola, ngakho-ke sakha imikhiqizo ukuze inikeze umuzwa ongcono womsebenzisi, sizama ukuchazela umsebenzisi ukuthi yini abangayithokozela noma bayisebenzise, ​​futhi sisebenzela nokuhlala siphephile njengenkampani, senzela imikhiqizo izimakethe eziyifunayo.
<° I-Linux: Sifunde ukubuyekezwa ku-Opera 11.60 kwamanye amawebhusayithi, lapho besho khona ukuthi izinketho eziningi ezifakwe kule nguqulo azikhethekile, ngoba ezinye iziphequluli ezinjenge-Chrome noma iFirefox zazivele zinazo. Inkinga ukuthi kuncane okwaziwayo nge-Opera Next, inguqulo ye-Rolling Release ye-Opera, lapho impela ushintsho / izinto ezintsha zisheshe zifike. Ungachaza kalula ngangokunokwenzeka, yini i-Opera Next, kanye nobuhle nobubi bayo maqondana nezinguqulo "ezibandayo" abazikhiphayo?
Amakhozi: I-Opera Next inguqulo yokuthuthukisa. Ikuvumela ukuthi uzame izinto zesizukulwane sakamuva, kepha kungahle kungabi nokuzinza okudingekayo okusetshenziswe njengengxenyekazi yomsebenzi. Izinhlobo "ezifriziwe" zenze inqubo eqinile yokuqinisekisa ikhwalithi yazo, ngakho-ke azinazo ezinye izici ezintsha, kepha zithembeke kakhulu ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
<° I-Linux: Njengamanje, ungakuchaza kanjani ukuxhaswa kwe-Opera nge-HTML5 ne-CSS3?
Amakhozi: Kuhle kakhulu, ngoba i-HTML5 ne-CSS3 azikachazwa okwamanje.
Ngokufakwa kwenguqulo engu-11.60 yeprosesa ye-HTML5 (ebizwa ngeRagnarök), njengazo zonke iziphequluli sinokuxhaswa okuncane noma okuncane kwezingxenye ezizinzile ze-HTML5 / CSS3. Kunokwehluka, futhi kunomsebenzi wawo wonke umuntu, kepha uma i-HTML5 isiqediwe kuzothatha isikhathi eside ngaphambi kokuba sithole ukwesekwa.
Umuntu othi «sisekela i-HTML5'Kodwa kuyisiphukuphuku ukungazi ukuthi akunakwenzeka ngenkathi imininingwane uqobo iqhubeka nokushintsha, noma icabanga ukuthi siyiziphukuphuku ngokwanele ukukukholelwa.
Njengoba izingxenye zama-specs zizinza, siwasebenzisa ku-Opera, kwesinye isikhathi ngaphambi kokuthi wonke umuntu alethe izinto ezintsha ku-HTML5, kwesinye isikhathi nawo wonke umuntu, kwesinye isikhathi ngemuva kwalokho ukuqinisekisa ukuthi akudingeki sishintshe okuthile ngemuva kokukufaka esipheqululini (yini okwenzeka kaningi ngezinguqulo zokuqala zokusebenza).
<° I-Linux: Ngaphandle kokungabaza, ama-plugins noma izengezo ziyinto ebalulekile lapho ukhetha isiphequluli. Kodwa-ke, lapho sivakashela isiza sama-plugins we-Opera saphoxeka ngandlela thile, njengoba lesi siphequluli esihle kakhulu singenawo ama-plugins wekhwalithi njengoba ubungalindela. Ungasichazela isizathu salesi simo?
Amakhozi: Kunezinto ezimbili okufanele uzigcine engqondweni. Okokuqala, izengezo ngokwazo akuyona into ebalulekile, okubalulekile yilokho okungenziwa ngesiphequluli. Ngalokho, izesekeli ziyindlela yokwenza izinto, hhayi ngaphezulu noma ngaphansi. I-Opera ibilokhu ifaka ukusebenza okuningi ngokwakhona ngokuzenzakalela kunezinye iziphequluli ezinganikeza kuphela ngama-plugins, yingakho kungabalulekanga kangako ukuba nezengezo ezingeziwe ngoba isiphequluli sesivele sinemisebenzi eminingi eyengeziwe.
Ngakho-ke, sichithe isikhathi esiningi sicabanga ngokuthi singenza kanjani uhlelo lokwengeza oluphendula izifiso zabasebenzisi nabathuthukisi. Empeleni, siqale nje ngalokho (nomsebenzi wami ngaphakathi kwe-Opera, kufaka phakathi ukuthuthukiswa kwamathuba amasha wezandiso esizofaka kuzinguqulo ezintsha ze-Opera). IFirefox isichithe iminyaka ngesistimu yama-addon, ngokuvamile abalulekile ukusebenzisa isiphequluli emhlabeni wangempela. IGoogle ibeke imali eningi ukuzuza okufanayo. I-Opera ikhula ngendlela ephilayo, futhi iqala kusukela lapho ungadingi khona izici eziningi kangaka.
Konke okushiwo, siyaqhubeka nokusebenza ukuthuthukisa amathuba nezandiso ezitholakalayo.
<° I-Linux: Uma othile efuna ukufaka isandla i-plugin ye-Opera emphakathini, ngabe kukhona umhlahlandlela, okokufundisa noma idokhumenti engabasiza ukuba babaqondise, bazi ukuthi bangabonisana nobani, izindaba ezilayisense, njll?
Amakhozi: Impela kunemininingwane eminingi (okokufundisa, imibhalo ye-API, izibonelo, njll) ku-http: //dev.opera.com/addons/extensions
Bhala lokhu kufayela elibiziwe i-config.xml
Lokhu okunye kokukodwa okubiziwe index.html
Y lokhu okunye engxenyeni yesithathu, ebizwa okuzivelelayo.html
Ngemodi kanjiniyela, vula ifayela i-config.xml ku-Opera, futhi ungaqala ukudlala ...
Uma unemibuzo, ngicela ungithinte.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Inhlolokhono yabamele i-Opera (isiphequluli) ibuyekeziwe
Amazwana ayi-37, shiya okwakho
Umsebenzi omuhle mngani 😉
Yebo, iqiniso liwukuthi, ingxoxo enhle kakhulu ngiyithandile
ngoba ayisebenzi ku- “Smartphone” kuphela kodwa nakuma-Smartphones asuka eminyakeni eyi-10 eyedlule, asevele “eyisilima” futhi lapho kungekho okunye okunye okungokoqobo) ./ cite
Lokhu kuyiqiniso impela, ngangiyazi i-Opera kudala nge-opera mini engangiyisebenzisa kwi-Siemems endala, futhi yasebenza izimangaliso, manje sengikhuthaziwe ukuthi ngiyisebenzise njengenye ye-firefox kwi-netbook yami ukuze ngibone ukuthi isebenza kanjani.
Mayelana nale ngxoxo ngizoba nezinto eziningi engizoziphikisa, kepha ngizogxila kuphela kule ngxenye manje:
<° Linux: Kungani i-Opera ingeyona i-OpenSource? Ama-Chaals: Akuwona Umthombo Ovulekile ngokomlando ngoba besinesiphequluli esisebenza kahle kakhulu, esisithengise kubakhiqizi abaningi ngemali, futhi ngalezi zinzuzo sikhokhele abathuthukisi bethu. Ukuba yinkampani ezinikele kakhulu ekwenzeni iziphequluli, ngokungafani nezinye (lapho ngifaka iMozilla / Firefox, eyakhokhelwa ngokomlando yiGoogle, IBM, Sun ne-AOL ngemuva kokunyamalala kweNetscape njengenkampani ebucayi, cishe ngonyaka ka-2000), bekubalulekile ukukwazi ukuthengisa izinzuzo esizinikezile. Ngaphezu kwalokho, isu lethu lokuthi sizovulani lalihlukile kuGoogle / Apple / Nokia njll. Esikhundleni sokuthatha i-KHTML njengesisekelo ebesivele singumthombo ovulekile othuthukiswe ngumphakathi, sithuthukise injini, iPresto. Ababaningi emhlabeni abangochwepheshe kulolo hlobo lwekhodi, ngakho-ke uma sibathola siyabasebenzisa (futhi-ke, siyabakhokhela). Kepha ingxenye okuyi-interface yomsebenzisi ibilokhu ivulekile kakhulu ku-Opera, ivumela umphakathi omkhulu ukuthi ushintshisane ngokwezifiso zawo, okwenze nge-my.opera.com namasayithi ayi-100% angaphandle kwi-Opera.
Ngicabanga ukuthi umngani uChaals uthole udumo ekhanda lakhe. Kulungile, ngiyakwamukela, Opera Isiphequluli esikhulu futhi kuwo wonke umlando sikhombisile ukuthi singumkhiqizo omuhle, kepha ingabe sisebenza ngokuphelele? Angicabangi kanjalo.
Kuyiqiniso ukuthi iMozilla (ngokwesibonelo) akuyona inkampani edala iziphequluli ukuthi "zizithengise", kepha zimbi kakhulu futhi zibe nomthelela omkhulu ekwakhiweni kwewebhu. Kufanele ubone umlando weNetscape ukwazi ukuthi ngenxa yeMozilla, namuhla iFirefox ilapho ikhona. Futhi kukhona into encomekayo ngempela, benze umkhiqizo (iFirefox) ongagcini ngokuba ngumthombo wamahhala futhi ovulekile, kepha futhi odlule i-Opera nayo yonke inkampani okungenzeka inayo ngemuva kwayo.
Abafana be-Opera bathuthukise uPresto, kuhle lokho kuyancomeka kodwa kusizani ukuthi benze okuthile okungaziphathi ngendlela efanele? Ukungasho izinto zobuchwepheshe, kepha ngokuhlangenwe nakho kwami ​​siqu, iFirefox ihlale ikhombisa izinto zewebhusayithi kangcono kune-Opera.
Noma kunjalo, kunezinto engingaziqondi:
1- Usho ukuthini uma uthi i-interface yomsebenzisi ibilokhu ivulekile kakhulu?
2- Ukuthi bathengisela izinkampani akudingeki kuthinte ukuthi i-Opera ayiwona umthombo ovulekile.
Angiyiboni impendulo ingalungile, impela isho okuthile okuyiqiniso, benze umkhiqizo omuhle, "osebenza kahle kakhulu", ngokwanele ukuze kube nezinkampani eziye zakhokha futhi zaqhubeka nokukhokha ngakho-ke zasinda endaweni lapho abanye bawa futhi bahluleka.
IFirefox kulapho ingekho ngenxa yeMozilla kuphela, futhi sibonga kakhulu iGoogle nemali yayo nokunye okuningi sibonga abashisekeli babasebenzisi lapho ngazifaka khona isikhathi eside. Ukusho ukuthi konke kubonga iMozilla akulungile, hhayi ngeqiniso kuphela nangezinkampani zakhe ezijwayelekile ezixhasayo, kodwa ngabantu ababemeseka futhi bemshumayeza mahhala.
Yebo, umkhiqizo wakho udlule i-Opera kodwa kuphela uma sikhuluma ngobungako bemakethe; ngekhwalithi nemisebenzi engingathanda kakhulu kepha akukho okusondele kakhulu.
Ekugcineni uthi uPresto uyahluleka ngoba "awuziphathi ngendlela obekufanele ngayo", kufanele uzibuze izinto ezimbili, eyokuqala ukuthi uma lokho okungakukhombisi kuyinto ethile ejwayelekile noma cha, noma uma lokho okungakukhombisi kona kushunqiselwa isiphequluli noma ngqo ngoba kuhlolwe futhi yaguqulelwa isiphequluli futhi umsebenzi ofanayo awenzelwanga i-Opera. IFirefox "ayizibonisi izinto ezingcono zewebhusayithi", onjiniyela benza amawebhusayithi abo kuFirefox ngakho-ke bonke bazobukeka kahle lapha. Nanamuhla ngo-2012, ukufaneleka kokukhombisa indawo kahle akubanga ngenxa yesiphequluli kepha kumdali owayihlola ngokuningiliziwe kusiphequluli esikwenzile.
Lapho ngiba ngumlandeli weFirefox (emuva ekuqaleni) Kwakungengenxa yeGoogle noma yikuphi ukukhangisa, kungenxa yazo zonke iziphequluli engangizama ngaleso sikhathi (I-Opera, IExplorer, Maxton ... njll) bekunguye kuphela oziphethe "njengoba kufanele." Isikhathi sihambile futhi iFirefox ibithuthuka kanye nabaphikisi bayo futhi yize ngikwazi ukusebenzisa iChromium, i-Opera noma esinye isiphequluli, iFirefox isona kuphela esingikhombisa izinto njengoba zinjalo.
Uma, njengoba usho, imbangela ukuthi onjiniyela benza amasayithi abo avivinye kuFirefox, kungani kunjalo? Akukona ukwehlisa noma ngubani, kepha izinhloso zabo kumele zibe nazo. Ngaphezu kwalokho, umakhi we-webhu noma umakhi wohlelo owenzela isiza sakhe kuphela isiphequluli, akazhloniphi (umbono wami uqobo) .Kwenzeka kanjani-ke ukuthi amasayithi avakashelwe izigidi zabasebenzisi, abavela emazweni ahlukene, amasistimu okusebenza kanye neziphequluli akhombisa kahle u-100% kuFirefox hhayi kwabanye?
Angazi, kukhona okuthile lapho okungahlungi ...
Ngiyafunga angithandi ukuphendula i-XD ende kangaka.
Kukhona labo ababa ngabalandeli ngenxa yokukhangisa kweGoogle, abanye ngenxa yokushunyayezwa kothile owayesevele engumlandeli nabanye bebodwa. Kepha isizathu asiyona into ebalulekile, okubalulekile ukuthi laba bantu babenomthwalo wokuyisa iFirefox lapho ifike khona, bephika ukuthi ayilungile futhi iphikisana nomlando.
Ngenkathi ngizama iFirefox noma ngabe yini eyayibizwa ngaleso sikhathi, kwakungeyona yodwa "eyayiziphatha ngendlela efanele" ngoba ngaleso sikhathi bobabili i-IE4 ne-IE5 benza futhi isizathu sasingenxa yokuthi amawebhu ayenzelwe bona. Eqinisweni, isiphequluli esinamathele ezingeni singahle sibonise iwebhu futhi ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi kwakushiwo okuningi (ngendlela yokuziqhenya) ukuthi iFirefox isebenzise izinto eziningi izama "ukulingisa" ukusebenza kwe-IE ; Impela kwakusho ukuthi lokhu kwakuyizindleko zokudela ukwethembeka emazingeni kodwa lokho akukhulunywa.
Ngesikhathi sakhe, abaningi bethu bashintshela kuFirefox hhayi ngenxa "yokuziphatha" ngoba lokhu bekungeke kube yisizathu sokushintsha, kepha ngenxa yezizathu ezingezona ezinjengokuthi "ukulwela ubukhosi", "impi ye-intanethi yamahhala" namanye ama-straws ama-epic abukeka sengathi ukhipha ku-Lord of the Ring, kodwa enobuntwana nawo wonke umuntu ongakaze abhekane nawo ukuphonsa itshe lokuqala.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lezi zinto zazinetha imvula kuphela kwiFirefox hhayi kuzo zonke ezinye izindlela ze-IE noma ngabe kufanele kube njalo, yingakho ngithi ekugcineni konke kwakungukushumayela ivangeli nokuxoxa ngokweqile. Ngemuva kokushintshela (kuFirefox), omunye wathola futhi wakuthanda ezinye izinto, ezinjengezinkophe (yize zikhona isikhathi eside kwezinye izinketho) kanye nokutholakala kwezandiso.
Kungani onjiniyela benza amasayithi abo eFirefox? kungaba nganoma yisiphi isizathu, Kepha ukukuthatha kalula ukuthi kungenxa yesizathu esifanele kungumbono ongelona iqiniso.
Kunezizathu eziningana ezenzeka kimi ukuthi kungani lokhu kwenzeka:
- Ngoba yisiphequluli esine-quota eningi futhi njalonjalo abathuthukisi benza amasayithi abo kwiziphequluli ezidumile. Isizathu sempilo yonke.
- Ngoba abathuthukisi bangabantu futhi abantu bathambekele ekushisekeleni ngokweqile futhi esimweni sesoftware bavame ukuthandana nezinhlelo zokusebenza.
- Ngaphezu kwalokho, kwi-Intanethi, nokuningi ngokwengeziwe eqenjini lonjiniyela, kunempi yenkolo ecishe ifingqwe ezimpini zenkolo engake ngasho ngaphambili, ezinqunyelwe ezempi njenge-PRO Firefox ne-ANTI IE.
- Ngoba ikhona umbono osabekayo osabalele wokuthi iFirefox iyona ejwayelekile. Ngoba kunabaningi abasebenzisa ngephutha isibalo esingamanga sokuthi "isayithi libukeka lilihle kuFirefox isayithi lihle", "uma lingabukeki lilihle kuFirefox isayithi libi", "uma kuhambisana namazinga okufanele asebenze ngawo kuFirefox ", njll. IFirefox kulezi zinsuku ikude nokuba umoya omusha wewebhu iwumdlavuza wewebhu ngenxa yalesi sizathu, ithathela indawo izinga futhi ibilokhu ikwenza iminyaka, cishe selokhu yaba khona.
Ukuthi unjiniyela owenza amawebhusayithi akhe abe nesayithi elilodwa akahlonishwa? Yebo kukhona futhi kuningi. Ngicabanga ukuthi umhlaba wangempela usebenza ngendlela ehlukile kunendlela "yokuziphatha", indlela "ehloniphekile" njalonjalo.
Ngaphezu kwalokho, kwenye impendulo ngafaka isixhumanisi lapho abaphendulile bevuma khona le nqubo, nayo ebingeyona imfihlo futhi engabonakala ezindaweni eziningi, ikakhulukazi kulabo abazinikele ezindabeni zentuthuko; empeleni kuyimfundiso ukuthuthukisa en Firefox.
Kungani amasayithi amakhulu futhi athandwayo ephawula ngobuvila obungaka? Ngaphandle kwalokhu engikushilo ngaphambili, uyazi. Mhlawumbe umnyango wezokuthuthukiswa kwewebhu usebenzisa umthetho ojwayelekile wokwenza inkulumo futhi uthi kunezinkulungwane zeziphequluli futhi akukufanele ukusebenzela wonke umuntu futhi nge-1, 2 noma 3 kuphela kwanele ngoba zingu-90% wemakethe nokuthi uma othile eza u-10% wabo beka uphawu olubaxwayisa ukuthi "bavuselele" kwesinye isiphequluli, esibukeka njengomthetho "owamukelwe ngokokuziphatha" kuleyo nyunyana, noma bamane bangasho lutho ngoba "yibo abazi "futhi abaphathi Abangekho ezikhathini ezimbalwa bakholelwa ukuthi yini ekuphambanisayo, okungenani emaphethelweni ezinkinga zobuchwepheshe.
Ngaphezulu kwawo wonke lawa masayithi, noma kungahle kungabonakali njengawo, akuvamile ukuthi kube nokushintshwa okungaguquki, ngakho-ke ngoshintsho kuyabiza kakhulu (kusayithi) noma kusebenza kakhulu / kuyabiza (konjiniyela) ukunikeza ukusekelwa okugcwele bese ulungisa.
I-Opera yisiphequluli sami engisithandayo, futhi angiziphutheli lezo "zandiso" ezikhuluma kakhulu ngazo ngezinye iziphequluli, kuzoba ukuthi angidingi ukusebenza okuningi kakhulu kusiphequluli, noma lezo engizidingayo sezivele zilethwe ngokuzenzakalela futhi angizenzi Ngibona isidingo sokufuna okuningi.
Umbono wami ufana nowakho, kepha emuva. I-Opera ifaka izinto eziningi engingazidingi (njengeklayenti leposi). Isiphequluli esihle kakhulu, kepha uma ngingasusa izinto engingazidingi (Imeyili, iBittorrent, mhlawumbe umfundi we-RSS) ukuyenza ikhanye, mhlawumbe ingaba phakathi kwezinye izindlela zami zokuqala.
Ukubingelela nokubonga ngokuma lapha
I-elav, ukuthi isipiliyoni sakho ngalesi siphequluli asisibi, akusho ukuthi nakwabanye, kuze kube namuhla asikaze singinike iphutha, ngaphandle kokukhishwa kwe-flash lapho inethebhu engaphezu kweyodwa ene-flash futhi ngikwazile ukuzama amahora namahora, ngenkathi ulanda, ufunda imeyili nokubhala ku-irc nge-opera.
Kwezinye izinto engivumelana ngazo namaChaals, ikakhulukazi endabeni yamalayisense, lapho ungadingi ukukhangisa njenge-chrome noma i-firefox, kunzima ukuvula ikhodi yakho, ngoba ingafika kothile, iguqule, isabalalise futhi wenze Isibonelo sakho, iziphequluli ezidumile, futhi bengingeke ngimangale uma kunamalungelo obunikazi phakathi nabakhiqizi.
Usebenzisa kangakanani isiphequluli (i-Opera)? Angikhulumi ngephutha lapho ungena ku-YouTube, noma ngidlala okuthile ku-flash (nakho lokho). Ngibhekise endleleni i-Opera ekhombisa ngayo izinto zewebhusayithi, ekwazi nokulayisha isitayela se-css esinezinkambu zombhalo, amabhokisi wokuhlola, ama-radiobuttons nokunye. Angikakwazanga ukukhulisa usayizi wesithombe lapho ngithumela ku-WordPress, noma ngabe iChromium ibingakwenzi. Kwenziwa ngubani? IFirefox ..
Ngisebenzisa ihhovisi ukushicilela ku-wordpress ngakho-ke bengizokwazi ukuthi ngikutshele ini, kepha ngisebenzisa i-opera amahora angaphezu kwayishumi ngosuku, yize emasontweni edlule bengisebenzisa ie windows
Kungani lokho kusebenza kuwe kuphela kuFirefox? Impendulo ayenziwa ngoba iFirefox iyindinganiso; Sengivele ngiyishilo impendulo ngaphambilini, kungenxa yokuthi bakwenze lokho ukuze kusebenze kuFirefox hhayi okunye. Ngaphambi kwalokho, izinto zazenzelwe ukuthi zisebenze ku-IE4, ku-IE5 futhi abanye bakudle.
Akukho okushintshile, kuphela okujwayelekile, manje ayisabizwa nge-IE5 kepha ibizwa ngeFirefox.
I-JS iyafana, kepha injini nendlela yokuyihumusha yehlukile kusiphequluli ngasinye.
Ukuphendula umbuzo wakho wokuqala, angazi ngoba angilisebenzisi lelo sayithi noma ngibonile ikhodi, kepha ngokobufakazi bakho obubonakala, kunzima ukuthi kungenjalo.
Kumbuzo wakho wesibili, empeleni cha ngoba kuncike ezintweni eziningana.
Okokuqala, asikho isiphequluli esisebenzisa okungu-100% kokucacisiwe okujwayelekile, noma ngabe kungenxa yesikhathi, ubunzima, iphutha lomuntu noma into ethandwayo, kukhona nalabo abasebenzisa ezinye izinkomba (ezingajwayelekile) "zokuhambisana".
Yebo, kuyiqiniso, kuneziphequluli ezivame ukusho ekukhangiseni kwazo ukuthi "zisezingeni" kodwa akulona iqiniso.
Manje, enye into ukuthi ukucaciswa kwe-javacript (ECMAScript) kuyinto eyodwa, okuyiyona, kepha njengoba ngishilo ngaphambili, enye into ukuqaliswa kweziphequluli.
Namuhla i-Opera yisiphequluli i-1 + 1 yayo ngu-2 cishe ngokuphelele ngokuphelele kokucaciswa kwe-ECMAScript.
Siyabonga ngokucaciselwa .. ^^
I-Opera mini iqiniso linazo zonke izinhlonipho zami.
Kunguqulo ye-pc engikuthandayo ukukwazi ukushintsha phakathi kwamathebhu ayimfihlo najwayelekile. Njengoba kushiwo ngenhla, amanye amakhasi abukeka emahle kwezinye iziphequluli kanti kwezinye awathinteki.
Ukuba ne-netbook, isikhalazo sami kuphela inani le-RAM eliyisebenzisayo, ngaphandle kwalokho kungaba intandokazi yami kalula. Yize ngingeza ukuthi i-interface yehluka kakhulu kokunye, kepha leyo yindaba yokunambitha. Ozithobayo.
Uma bekufanele ngikunikeze iseluleko esithile, bengizokutshela ukuthi wenze iLinux distro nge-Chrome OS, kepha isuselwe esikhundleni se-rpm ku-Sabayon noma i-Arch okuyiyona eshesha kakhulu.
Futhi nge-Opera njengesixhumi esibonakalayo. Nge-GTK3 ungasebenzisa noma isiphequluli somncintiswano kwesinye isiphequluli.
Kulula ukuhlela ama-template nama-interface, ngakho-ke, ekubeni yipulatifomu efanayo, wonke umuntu angakhetha ukubukeka akuthanda kakhulu noma asungule okusha.
Ukushicilelwa kwalesi sixhumi esibonakalayo ukuthi kufakwe kwamanye ama-distros
Futhi-ke yenza inguqulo ye-ARM yale OS, efakwe njengohlelo lokusebenza nge-VNC noma ngokwendabuko njengoba iphrojekthi ye-mozilla ihlose ukwenza i-OS yama-mobiles enezinhlelo zokusebenza ze-HTML5.
Ukuthi uma bengasusi uDkt Presto wami, igajethi ye-Opera yokubulala izinto ezinkulu.
IFirefox ikhule ibonga emphakathini okholelwa cishe kwimishini yezenkolo
Lokho bekungaphezu kwanoma yini ukugwema ama-roll amabi
Yebo, kepha hheyi, ngibona labo abasebenzisa i-chrome ngaphezulu kwe-xD yenkolo
Ingxoxo enhle kakhulu, ukuphela kwento okufanele ngiyisho, i-Opera ibe yisiphequluli sami esizenzakalelayo iminyaka engaphezu kwengu-7, ngiyisebenzisa kwi-netbook yami ne-Arch, kwi-PC kadadewethu ene-Windows, esiteshini sami sokusebenzela neFedora, kwi-macbook yentombi yami , neNokia x2 yami, konke kuvunyelanisiwe.
Ngicabanga ukuthi imininingwane ebaluleke kakhulu ilahlekile, i-Opera Turbo kanye nekhono layo lokuhamba kumanethiwekhi ahamba kancane, ngivela eColombia futhi ngisebenza nemiphakathi yabomdabu, futhi lapho ngiya ezindaweni ezikude lapho kungekho ukuxhumana kwe-wi-fi, noma izintambo, kusele ukusebenzisa imodemu 3G kuphela, kanti ngenkathi i-firefox izama ukulayisha ikhasi ngejubane le-EDGE noma ngaphansi, i-Opera turbo ingivumela ukuthi ngivule amakhasi amaningi ngejubane elamukelekayo, ngaphandle kokulayisha kabusha i-RAM ngokuvimba ama-plugins afana ne-flash ne-java (yebo, i-opera iba yi-opera mini), futhi "imodi ye-bandwidth ephansi" kwiklayenti le-imeyili ingivumela ukuthi ngisebenzise ama-akhawunti wami we-imeyili we-GMail, GMX ne-MyOpera ngaphandle kwenkinga.
Inhlolokhono iyathakazelisa kakhulu, ngiyavumelana ngezikhundla eziningi zamaChaals. Isibonelo, kuyiqiniso ukuthi bathathe imali ngokufuna ukukhokhisa isiphequluli sabo, bese bekunikeza njenge-shareware ngokukhangisa. Lapho bephendula iFirefox ibibadlile.
Kwezinye izinto angivumelani kangako, noma eminye imibuzo, ikakhulukazi ngombuzo owodwa: ukusetshenziswa okuphezulu kwe-RAM. Uma sikhuluma ngememori, i-Opera isebenzisa okungaphansi kweFirefox (osekukudala yaphela ukuba yizinsizakusebenza ezishwabadelayo ezisolwa ngabanye) nokuncane kakhulu kune-Chrome. Enye into ukuthi ngamunye ubhekisa kokuhlangenwe nakho kwakhe maqondana "nokuzizwa usinda" kukhulunywa. Lokho kwehlukile. Futhi ngerekhodi, ngincamela iFirefox neChannel kune-Opera, impela ngenxa yesimo sabo njenge-Open Source software (yize i-Chrome kungewona umthombo ovuleke ngokuphelele), okungenye iphuzu lapho ngenhlonipho efanele ngishanela khona ekhaya ngesihlathi esincane .
I-Opera ibilokhu inenqwaba yabasebenzisi bevangeli, futhi uma bengatholanga izibonelelo ezinjengeFirefox abakwazi ukukhononda, ngoba bekulokhu kungenxa yokuthi kungumthombo ovaliwe womthombo (ngiyavuma ukuthi ngokwalokho okucabangile ikwazile ukusiza kubo, kepha ukuqinisa okuthile njengokuzwakala ...), ngaphezu kwesabelo sayo semakethe, ukuthi iFirefox ayinikezwa imali nayo.
I-Opera iyisoftware enhle, kepha kunjalo neFirefox neChrome, futhi izinzuzo eziphakathi kwalezi ziphequluli zisatshalaliswa kakhulu ezintweni ezibalulekile okuthi ekugcineni umsebenzisi, akuthandayo nezidingo zakhe (nalapho ulwazi nentshisekelo yabo kuya khona, kunjalo). Namuhla, ngokwesibonelo, noma imuphi umsebenzisi wezinsizakalo ze-Google osebenzisa i-Opera akufanele ajabule kakhulu, njengoba kunjalo nge-Chrome ne-Firefox (nanamuhla, i-Google inesisindo esikhulu kakhulu kune-Opera). Futhi ngicabanga ukuthi iphutha lilele kuGoogle, elijezisa iKonqueror nge-KHTML maqondana nalokhu, kepha kuyinto umsebenzisi ojwayelekile angayeki kangako ngayo.
Ngendlela, i-Opera ayizange isungule amathebhu, noma ikuphi iwenze athandwa
Hhayi, imikhonzo kanye nokuhalalisela kwinhlolokhono, kube kuhle kakhulu 🙂
Sawubona metalbyte, kuyintokozo ukukufunda lapha futhi ngiyabonga ngokubhala :).
Kwezinye izinto angivumelani kangako, noma eminye imibuzo, ikakhulukazi ngombuzo owodwa: ukusetshenziswa okuphezulu kwe-RAM. Uma sikhuluma ngememori, i-Opera isebenzisa okungaphansi kweFirefox (osekukudala yaphela ukuba yizinsizakusebenza ezishwabadelayo ezisolwa ngabanye) nokuncane kakhulu kune-Chrome. Okunye futhi ukuthi ngamunye ubhekisa kokuhlangenwe nakho kwabo maqondana "nokuzizwa usindwa". Lokho kwehlukile. Futhi ngerekhodi, ngincamela iFirefox neChannel kune-Opera, impela ngenxa yesimo sabo njenge-Open Source software (yize i-Chrome kungewona umthombo ovuleke ngokuphelele), okungenye iphuzu lapho ngenhlonipho efanele ngishanela khona ekhaya ngesihlathi esincane .
Indoda Usebenzisa yiphi inguqulo ye-Opera? Ngoba azikho kulezi engizisebenzisile ezidla ngaphansi kweFirefox noma iChromium. Angicabangi ukuthi iku-PC yami kuphela, abanye abasebenzisi (isibonelo i-KZKGGaara) babe nenjabulo yokubona ukwanda kokusetshenziswa (700Mb kuphela Opera). Kepha-ke, uma kokuhlangenwe nakho kwakho siqu uthi udla okuncane, angiyena umuntu ongaphikisa noma yini.
Yebo, ngihlala ngisebenzisa eyokugcina, manje eyi-11.60. Eqinisweni, njengamanje nginamakhompyutha amabili, iXubuntu 11.10 ne-openSUSE 12.1 (KDE) futhi kuwo womabili umehluko ucacile maqondana neFirefox 9, futhi njengoba kunjalo ngeChannel / Chromium vula amathebhu ayi-10, ukhohlwe. Kepha kuyinto engiyifakazele kakhulu, yingakho ingimangaza kakhulu ukuthi manje sekuthiwa i-Opera idla kakhulu lapho into efana nale ingakaze ishiwo.
Ngenxa yelukuluku nje kuphela, ingabe umuntu angathumela isithombe-skrini ukuze asibuke?
Futhi kuma-windoseros endawo, engibona ukuthi kukhona okumbalwa, manje sizwa okuningi ngeMaxthon 3, bakubeka njengeshesha kakhulu emakethe futhi okuhamba phambili ekuphatheni kwe-HTML5 (imininingwane ngeke iqedwe, kepha ikhona impela kwi-Intanethi).
Yizame nge-Opera Next ... Ngiyakuqinisekisa ukuthi izoba nokuthuthuka okuningi.
I-Chrome ayivuli ngokuphelele, kepha uma ngingenaphutha i-chormium yebo. Ngemuva kokusesha kancane ngithole lolu lwazi. Yize kungesona isihloko esivaliwe kimi futhi ngicabanga ngaso kaningi, inkululeko yekhodi yinto eza kuqala kimi, kwiziphequluli noma kunoma iyiphi isoftware.
Uma ngifika ekhaya ngizozama.
Umbuzo wami manje ukuthi ngabe ubumfihlo be-chrome / chromium bungalungiswa ngendlela yokuthi ungabhekwa, noma kuhlale kukhona okungenani okuncane.
Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyaxolisa ukuthi kusinda 😀
Isiphequluli akuyona ukuphela kwento umuntu (umsebenzisi) asebenzisana ngayo nenethiwekhi, ngakho-ke isiphequluli senza, kubalulekile ukukhetha ngokucophelela isiphequluli, kanye ne-OS (Isistimu Esebenzayo), kanye nathi uqobo qaphela esikubeka enetheni.
Ungakhathazeki, emahoreni ambalwa ngizoshicilela okuthunyelwe okuphathelene nokuphepha kwe-inthanethi, amathiphu, njll
Ngincoma ukuthi ulinde futhi ulifunde, ngikholwe ukuthi kuzoba mnandi kakhulu muy
PS: HAHAHA cha neze, kuyintokozo ukusiza haha
Ngokuvamile bebeyizimpendulo ezinhle kepha ngihlekiswa ngu "noma ucabanga ukuthi siyiziphukuphuku kakhulu ukukukholelwa", ngoba iqiniso ukuthi baningi, abantu abaningi "abayiziphukuphuku" abakholwa izindaba zokuxhaswa kwe-HTML5 futhi ukweqa ngokweqile futhi kunikeza inani langempela ekuhlolweni kwe-HTML5 namademo e-HTML5, njll.
UJunier J kusho
Into eyodwa uMnu Chaal angayinaki ukuthi iGoogle ayikhokhi iMozilla, lolu daba seluthathwe kaningi futhi abantu bahlala bengaqondi kahle. Ukuthi bagcina izinkontileka kuliqiniso kepha le ndoda iya kude kakhulu.
Futhi yize iGoogle iyeka ukuxhasa ngezimali (kuzofanele silinde kuze kube unyaka ka-2013), iMozilla inezimo ezenziwe ukuze ingayithinti kakhulu.
Phendula u-Yunier J
Lokhu akusho kuyinto eyenzekile empeleni futhi engabhekisi ngqo enkontilekeni ezwakala kakhulu namhlanje.
Okokuqala, iGoogle kusuka "ngosuku lokuqala" yamukela iMozilla futhi yadlulisa imali, ngaphandle kokuthi ibe yinoma yini empilweni. Empeleni i-Google ngale ndlela yanqoba uthando lwama-geek amaningi ngokubonakala njengomuntu omuhle "ongeyena omubi" owayesekela amaphrojekthi wamahhala wokuqeda ububi be-Microsoft ne-IE. Yize bekuhlala njalo "kukhethekile" ngeMozilla, ibikwenza namanye amaphrojekthi (iWikipedia, i-OpenOffice, njll.).
Enye into ukuthi ikhokhele ukufakwa kweFirefox nokukhangisa. Isibonelo, ukube ubunesayithi bese ubeka inkinobho ethi "Landa iFirefox", kumuntu ngamunye oyichofoze, iGoogle izokukhokhela idola elilodwa. Vele, abantu abaningi nabo babeka le nkinobho bebodwa ngaphandle kokubhalisa ku-AdSesne futhi-ke bona abakhokhisi lutho, mhlawumbe bakwenza ngokulingisa bengazi ukuthi bekuyisinyathelo esikhokhelwayo.
Noma kunjalo, ngiyinikeze ukumemezela nokuxhasa ngezimali, empeleni inkumbulo yami ayilungile, kepha ngicabanga ukuthi kunesikhathi lapho lapho ufaka nge-IE endala kuzovela kuGoogle "usebenzisa isiphequluli sakudala ukufaka iFirefox." Futhi ngitshele ukuthi esinye isiphequluli sinekhasi laso le-Google.
Lezi yizinto ezenzekile kodwa abaningi kubonakala bengazazi.
Umbono wami othobekile:
Ngisebenzisa iFirefox? YEBO, kunezizathu eziningi,
Nginayo i-opera? yebo,
Kungani? ngoba inamapulatifomu amaningi futhi ngoba angazi ukuthi amaklayenti asebenzisa siphi isiphequluli futhi kusobala ukuthi kufanele ngiqinisekise umsebenzi wami (KuFirefox, Chrome, Opera)
Nginayo i-IE? Hhayi ngoba? ngoba akuyona ipulatifomu eminingi,
Ngibheka kanjani ukuthi engikwenzayo ku-IE kuyasebenza noma cha? Elula, angazi, i-QA iyangenzela (ngiyinto ehlukile enkampanini).
I-Opera ngokomlando ibiyisiphequluli sami sokuzikhethela baze baqala ukulahlekelwa yindlela ebuyela emuva kunguqulo 8 (ngicabanga ukuthi inguqulo yokugcina engiyisebenzisile ibingu-7.56, kuze kube yileso sikhathi bengingumlandeli we-Opera).
Njengamanje akusona isiphequluli esibi, kunalokho, i-Presto iyinjini enkulu futhi i-Dragonfly inhle kakhulu, ilusizo impela, kepha kunemininingwane ethile engidinga ukuyilungisa ukuze ngiyenze isiphequluli sami engisithandayo:
1. I-Opera Light! (Noma iMini): ngicela uyeke umbhedo wakho ngomqondo wakho "Masibeke konke abantu abakusebenzisa kwi-Opera ukuze bangasebenzisi okunye ngaphandle komkhiqizo wethu."
Uma isiphequluli sibuyela emuva ekubeni yilokho, isiphequluli, sizothola amaphuzu amaningi. Isiphequluli kuphela, ngaphandle kweklayenti lemeyili, i-RSS, i-BitTorrent (i-WTF!), I-Unite noma enye into engekho, okungama-addons / ama-plugins / izandiso kakhulu, kepha hhayi ingxenye eyisisekelo yesiphequluli.
2. I-Opera ithatha izinsiza eziningi kakhulu, njenge-Chrome / Chromium kepha ngaphandle kokuba nayo yonke i-subsystem yethebhu ye-sandboxing lezi ziphequluli ezinayo.
3.Smooth-scroll: Kungabonakala kungubuwula, kepha selokhu ngaqala ukusebenzisa iFirefox neChromium ngalesi sici senziwe sasebenza (ngama-plugins wesithathu) sekube nzima kimi ukuzula iwebhu, umqulu ongenawo ungenye yezinto ezinhle kakhulu I-Apple… (kuChromium «Wheel Smooth Scroller» nakuFirefox «Yet Another Smooth scrolling»).
4. Ukusebenzisa i-Gmail nge-Opera ukuhlukumeza - okwamanje! Ihamba kancane, ngisho neQupzilla ingcono kakhulu kune-Opera ene-Gmail (ingabe inkinga kaPresto?)
Ingxoxo enhle, ibifushane!
Isebenza ngokunembile - ngicabanga ukuthi ukuphela kwesiphequluli esine-smoothscroll futhi sisebenza kahle impela, kungaba yi-Chrome neFirefox abangenayo, leso sici sinikezwa isandiso.
Yebo, bengikhuluma ngokusheshisa.
Inkinga yokuthi kulula ukungakwenzi ku-Opera angiyazi, uhlelo lwesiphequluli se-browser lusengozini enkulu futhi kuze kube yilapho i-API iguqulwa futhi yandiswa kunezinto eziningi ezingeke zikwazi ukwenziwa, ngokwesibonelo iXmarks, ezibalulekile ukuvumelanisa amabhukumaka phakathi kweziphequluli ezahlukahlukene - inguqulo ye-Opera ilayishiwe, iqondisa kabusha kuwebhusayithi yenkampani lapho icacisa khona ukuthi okwamanje i-Opera ayinakho ukuguquguquka kokufaka i-plugin, empeleni iLastpass, nayo evela enkampanini efanayo , kukhanya okukhanyayo eduze kwenguqulo yayo ye-Chrome / Chromium neFirefox.
Lungisa ukungqubuzana neWicd ku-ArchBang